Kooxda Lazio oo ku dhow inay la saxiixato difaac ka tirsan Liverpool – Gool FM
(Rome) 21 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Lazio ayaa la soo warinayaa inay aad ugu dhow dahay inay la saxiixato difaaca naadiga Liverpool ee Alberto Moreno.
Difaaca kooxda Liverpool, Alberto Moreno ayaa la soo sheegayaa inuu qarka u saaran yahay inuu dhaqaaqo oo uu u saxiixo naadiga Lazio.
Moreno ayaa ku jira dhammaadka xilli ciyaareedkiisii shanaad ee garoonka Anfield, laakiin ciyaaryahanka reer Spain ayaa beeca xorta ah kaga tagi doona kooxda Merseyside-ka dhammaadka xilli ciyaareedkaan.
26-sano jirkaan ayaa kaliya afar kulan saftay xilli ciyaareedkan, laakiin sida ay warinayso Jariiradda The Independent, kooxda Lazio ayaa diyaar u ah inay dhammeystirto saxiixa daafacan dambeedka bidix.
Moreno ayaa awooda inuu qandaraas u saxiixo koox ajnabi ah, waxaana ay u muuqataa in go’aan lagu gaaray inuu tartan cusub ku qaato horyaalka Serie A ee Waddanka Talyaaniga.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Real Betis ay sidoo kale diyaar u tahay inay u dhaqaaqdo soo xero gelinta ciyaaryahankii hore ee kooxda Sevilla.